मुस्कानले कस्तो फरक पार्छ! | Martech Zone
मुस्कानले कस्तो फरक पार्छ!
सोमबार, मार्च 12, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
प्रत्येक पटक मैले मेरो ब्ल्ग विषयवस्तु परिमार्जन गरेपछि, मैले पहिलो पृष्ठमा मेरो तस्वीर छोडिदिएँ। प्रत्येक चोटि जब मैले यसलाई छोडिदिएँ, म एक टन ईमेलहरू र टिप्पणीहरू पाउँदछु जहाँबाट यो सोधिएको छ! म त्यो गल्ती फेरि कहिल्यै गर्दिन - यो मेरो साइटमा कत्ति प्रतिक्रिया र व्यक्तित्व ल्याउने मलाई आकर्षक छ। म कुनै पनि हिसाबले मादक छैन, म साइटमा मेरो फोटो राख्ने संग संघर्ष गर्दछु। जहाँसम्म, तपाईले कहिल्यै थाहा नभएको व्यक्तिसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न कत्ति गाह्रो छ भनेर मैले थाहा पाएँ।
यदि ब्लगहरू कुराकानीहरू हुन् भने, तपाईले कसैसँग कुराकानी गर्नुभयो जुन तपाईंले देख्नुहुन्न? मैले स्वीकार्नुपर्नेछ, हेडरमा मेरो मुस्कुराएको मगलाई इम्बेड गर्नु अघि, साइट वास्तवमै एकदम सामान्य देखिएको थियो। म हँसिलो अनुहारको ब्लगको बृद्धिमा कत्ति धेरै प्रभाव पार्दछु भनेर अचम्म लाग्छ। पक्कै यसको केही प्रभाव छ।
माथिको ग्लैमर लगभग years बर्ष पहिले लिइएको थियो जब म डेनभर, कोलोराडोमा डट कॉममा काम गर्दै थिएँ। म त्यो भारी फोटोमा भएको भन्दा धेरै गह्रौं, नराम्रो र नरम छु। त्यो फोटोग्राफरसँग धेरै प्रतिभा थियो! यो शट हो जुन म साइटको वरिपरि धेरै समयको लागि राख्छु। जहाँसम्म पनी म आकारमा फिर्ता हुन्छु (नाशपाती बाहेक अन्य)। म मानिससँग ठट्टा गर्छु कि यदि मैले मेरो ल्यापटप चलाउन बाइक चलाउन वा सवारी गर्नु पर्छ भने, म मिस्टर युनिभर्स हुँ। निश्चय पनि विज्ञानले हामीलाई किबोर्डि and, पिज्जा र लेट-रात प्रोग्रामिंगको स्वस्थ जीवनशैली प्रदान गर्न हामीलाई समात्न सक्छ, सक्दैन र?
यस बीच, म ग्लैमर शट अप राख्छु। जब म तपाईंलाई भेट्न जान्छु, तपाईंले त्यहाँ उस्तै मुस्कान देख्नुहुनेछ - यद्यपि अनुहार त्यति राम्रो देखिंदैन।
मेरो हालको पठन र विकीनोमिक्सको समीक्षा
विकीनोमिक्स: कसरी ठूलो सहयोगले व्यवसाय परिवर्तन गर्दछ
मार्क्स 12, 2007 मा 7: 46 PM
नयाँ डिजाइनमा बधाई छ। धेरै राम्रो, र स्वच्छ।
(र अब विज्ञापन लि link्क एक साधारण पाठ पृष्ठमा जान्छ कि यसले मलाई सही पृष्ठमा पुनःनिर्देशित गर्दछ। यसको सट्टा यसले आफैं पुनः लोड गरिरहन्छ। के यो म्याक समस्या हो?)
मार्क्स 12, 2007 मा 7: 54 PM
फिक्स्ड! यो एकदम बिल्कुलै थियो भयानक रिडाइरेक्ट कोड जुन मैले लेखें र परीक्षण गरेन।
मार्क्स 24, 2007 मा 4: 50 PM
हो अब यो काम गर्दछ। तपाइँ सायद आफ्नो पुन: प्रत्यक्ष पृष्ठ into मा एक "छैन" थप्न चाहानुहुन्छ
यदि पृष्ठ seconds सेकेन्ड पछि लोड भयो भने, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मार्क्स 24, 2007 मा 4: 55 PM
म तिमी मान्छे बिना के गर्ने ?! धन्यवाद!
मार्क्स 12, 2007 मा 10: 17 PM
नामको साथ पनि तपाईंको "मग" यसले आउँदो आरामदायी ठाउँ जस्तो महसुस गर्दछ।
मार्क्स 12, 2007 मा 10: 20 PM
धन्यबाद, स्टीवन! त्यो पक्कै मेरो लागि जाँदैछु। सबै स्वागत छ ... मतलब भन्दा बाहेक!
मार्स 13, 2007 मा 9: 09 एएम
डग! ठूलो सुधार!
म भन्न लागिरहेको थिएँ 'सूट खाडल गर्नुहोस् र फेरि पहिलेको खुशीको छविमा फर्कनुहोस्', र त्यसपछि मैले एक सेकेन्ड सोचे ... सायद दुई…
ठीक छ, हामीलाई वास्तवमा प्रविधि र मार्केटिंगको बारेमा कुरा गर्ने सूटमा अर्को केटा चाहिन्छ? अर्को, हामी वास्तवमै स्वेटर (पुरानो पिक) मा स्लकरबाट टेक्नोलोजी र मार्केटिंगको बारेमा पढ्न चाहन्छौं?
त्यसो भए हामी के गर्छौं? हामीसँग पहिलो चित्रको मिश्रण तपाईंलाई आवश्यक छ तपाईंसँग हाँस्दै, र दोस्रो चित्र - तर टाई बिना नै। सम्पूर्ण 'मैत्री / हास्यास्पद, गैर-भरपर्दो, अझै पनी पेशेवर' लुक र भावना।
तर हे, यो तपाईको कल हो, र तपाई अझै x१००० बहादुर हुनुहुन्छ तपाईको हेडरमा हेडशट प्रयोग गर्नका लागि। (म मेरो सुरक्षित एम्बिग्राम हेडरसँग टाँसिदिन जाँदैछु जब सम्म मँलाई फेरि हेरेदिन ...) 😉
मार्स 13, 2007 मा 10: 55 एएम
ठीक छ, दिमागमा राख्नुहोस् यो केटाबाट आएको हो जसको आफ्नै हेडरमा एक कार्टुन छ, तर विलियम जस्तै मलाई पनि "हाँस्ने डग।" तर विलियमको विपरीत, म मेरो टेक्नोलोजी र मार्केटिंग स्वेटरमा स्लकरबाट चाहान्छु 🙂
यद्यपि यो उत्कृष्ट तस्विर हो, र समग्र लुक अद्भुत छ - कुरकुरा, स्वच्छ, तर बोल्ड।
मलाई यो मन पर्छ।
मार्क्स 14, 2007 मा 6: 27 PM
म यो चित्रमा हाँस्दै छु! हाँसो किनभने म उत्सुक छु कति देखाउने छु जुन यसले मलाई प्रस्तुत गर्न लायक बनाउँछ।
मार्स 13, 2007 मा 11: 15 एएम
टोनीको भोट: हाँसोको डग।
मेरो भोट: हाँसेको डग।
अब भोट दिनुहोस्! 😉
टोनी: मलाईँ अब तपाईको ब्लग राम्रोसँग थाहा छ - तपाईले SOAP'd गरिरहनु भएको छ हामी रोबर्ट ह्रुजेक (मिडल्सज़ोनम्युसिंग्स.कट) बाट बोलेझैं! यो काम गरिरहेको जस्तै सजिलो कामको बारेमा थियो! (चिकित्सा उद्योगमा राम्रो महिना हुनुपर्दछ)
मार्क्स 14, 2007 मा 4: 58 PM
मैले मेरो बिरालोको तस्वीरबाट पनि त्यस्तै भयो। 🙂
कुन बिन्दुमा यो गुट स्थितिमा पुग्छ?
मार्क्स 14, 2007 मा 6: 26 PM
engtech, कि शानदार छ!
मसँग बिरालो छैन। मसँग कूपर रसल छ जसको नाम कूपर छ र ती सबै बिरालाहरू खोज्छ र मार्छ। 🙁
मार्क्स 14, 2007 मा 7: 05 PM
हँसिलो अनुहार र बिरालोहरूको यो सबै कुरा मलाई मिल्यो त्यसैले मैले WinLxtra मस्कटको साईडबार विजेट थप गर्ने LOL भन्दा आधा जति बाटोको बारेमा निर्णय गर्ने निर्णय गरें।